Axkaamta Xajka | Maalmahanews
Mahad Alle SWT ka dib waxa aynnu si kooban uga hadli doonnaa axkaamta Xajka kolba haddii lagu gudojiro gudashadeedi. Waxa aynnu u fududayn doonna walaalaheenna gudanaya oo aynnu qormooyin kooban u gudbin doonno.
Ugu horrayn Xajku waa tiir ka mid ah tiirarka Islaamka. Waa waajib la ina faray in aynnu nolosheenna hal mar gudanno, sida Sarreeye suuradda Al Cimraan innagu faray— “Alle dadka wuxu furay in ay ku soo xajaan gurigiisa ‘Kacbada’, ruuxi kara.”
“War ma ka haysaa sidii uu ka yeelay Alle Colkii Maroodiga? Miyaanu ka yeelin shirqoolkoodii mid fashilmay? Korkoodana miyaanu u soo dirin shimbiro kooxo ah? [oo] ganaya dhagaxaan dhoobo ah, oo la dubay? Miyaanu ka yeelin bal la daaqay [iyagii]?”
Waxa sida oo kale xusid mudan in dib-u-dhis lagu sameeyey kacbada xilligii Qurayshi deggenayd Maka. Waxa taariikhdu sheegtaa in ay yidhaahdeen, “Lagu dhisi maayo xoolo la soo dhacay, iyo xoolo ay leedahay haweenay xun.” Waa ta keentay in aan la gaadhsiin seeskii Nebi Ibraahin Cs.